Shiinaha Mashiinka Baakadaha Baakada Automatic Soo saar iyo Warshad | Yuanhengtong
Baaxadda dalabka Waxay ku habboon tahay barkinta baakadaha adag, cuntada (roodhida, hamburger, rootiga uumiga ah, baastada degdegga ah, buskudka noocyada kala duwan ah, iwm), alaabada fayadhowrka, qalabka dhismaha, iwm. waxaa lagu qalabeyn karaa khad daabacaha gacanta si loo sii fududeeyo isticmaalka macaamiisha, loo badbaadiyo ilaa 50% foosha, loona badbaadiyo ilaa 30% filimka baakadaha lagu duulayo. 2. Qaybaha muhiimka ah ee mashiinku waxay ka sameysan yihiin bir bir ah, oo nadaafadda la kulmeysa ...
Waxay ku habboon tahay barkinta baakadaha adag, cuntada (roodhida, hamburger, rootiga uumiga ah, baastada degdegga ah, buskudka kala duwan, iwm.), Alaabada fayadhowrka, qalabka dhismaha, iwm.
1. Marka loo eego baahida macaamiisha, waxaa lagu qalabeyn karaa khadka gudbiyaha gacanta si loo sii fududeeyo isticmaalka macaamiisha, loo badbaadiyo ilaa 50% foosha, loona badbaadiyo ilaa 30% filimka baakadka.
2. Qaybaha muhiimka ah ee mashiinku waxay ka sameysan yihiin bir bir ah, oo buuxisa shuruudaha nadaafadda ee cuntada QS (liisanka wax soo saarka) iyo GMP (baakadaha daroogada)
3. Raadinta otomaatiga ah ee isha korantada sare leh, ma laha hagaajin gacmeed ka dib dejinta, xiritaanka saxda ah iyo jarista cabbirka iyo booska, xiritaanka adag iyo quruxda badan.
4. PID heerkulka madaxbanaan (xakamaynta heerkulka) xakamaynta caqliga, xakamaynta heerkulka xasilloon, oo sifiican ugu habboon dhammaan noocyada qalabka baakadaha.
5. Midabka muuqaalka taabashada ah, joojinta meelaynta, shaqaynta cilad otomaatig ah, muuqaal cad oo hal maalin ah.
6. Tirinta wax soo saarka otomaatiga ah, wax soo saar tiro iyo soo saar sax ah oo sax ah
7. Naqshadeynta farsamada iyo habka gudbinta waa fududahay, shaqada waa la aqbali karaa, dayactirkuna waa ku habboon yahay.
1. Cunto: keeg, rooti, ​​buskud, buskud, muufka hilibka, keega, keega dushiisa, kiish sausage ah, baastada, hilibka lo'da, duudduuban ukunta, iwm
2. Khudaarta iyo miraha: tufaaxa, mooska, saladhka, baradhada, yaanyada, basbaaska, qajaarka,
3. Qalabka: birta, tuubada birta ah ee birta ah, qaadista, fur, lowska, makiinadda dharka lagu dhaqo, iwm
4. Alaabada huteelka: saabuun, shanlo la tuuro, daawada cadayga iyo cadayga.
5. Qalabka xafiisyada: qalin, caag, buug yar, kaarka warqadda, cajalad dhejis ah
6. Alaabta korontada: batteriga, fiilada USB-ga, qalabka dhegaha la geliyo, buuga isticmaalaha iyo qalab ka kooban qalab.
7. Adeegsiga caafimaadka: maaskarada, gacmo gashi, faashad, kaabsullo, siriinjyo la tuuri karo.
8. Isticmaalka maalinlaha ah: mindi caag ah, fargeeto, saxan, isbuunyo, saabuun, masax, dhowr caws oo ku jira bac, koob, dhalo, gogosha, xafaayadda ilmaha, iwm.
1. Bixinta rakibidda mashiinka, hagaajinta, dejinta iyo hagaajinta buugga / fiidiyowga.
2. Haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo aad xal u heli weydo, isgaarsiinta isgaarsiinta tooska ah ee tooska ah ama tooska ah ayaa la heli karaa 24 saacadood maalintii.
Saddex. Mashiinka waa la damaanad qaaday muddo sannad ah. Inta lagu jiro muddada damaanad-qaadka, haddii qayb ka mid ah aan waxyeello farsamo ahaan u soo gaarin. Midka cusub ayaan kuugu badali doonaa adiga lacag la’aan. Dammaanad-qaadku wuxuu bilaabmi doonaa ka dib markaan helno B / L.
Moodooyinka MSD-250 MSD-450 MSD-590
Ballaarinta Filimka ≤ 250mm ≤ 250mm ≤ 250mm
Dhererka Bacda 80-310mm 100-450mm 100-450mm
Ballaaran Bacaha 10-140mm 10-140mm 10-220mm
Soo saar Ctheight 5-50mm 10-50mm 10-50mm
Qiimaha Baakadaha 10-180bag / min 10-180bag / min 10-180bag / min
Cabirka mashiinka 3770X670X1450 5050X960X155 5050X1250X1650
Miisaanka guud 800KG 900KG 1000KG
Ballaca Wareegga Fim 320mm
Awood 220V / 380V, 50 / 60Hz
Ikhtiyaar ikhtiyaari ah Mashiinka koodhka, aaladda sicir bararka, iwm
Hore: Waxqabadka Badan ee Tooska ah ee hadda Argon Arc Alxanka
Xiga: MSFT Horizontal side side otomaatig ah